ဧရာ၀တီစင်တာသို့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်၊ အစ္စရေး၊ အီတလီ နိုင်ငံများမှ သံအမတ်ကြီးများနှင့် သံရုံးတာဝန်ရှိသူများ လာရောက်ကြည့်ရှု - Yangon Nation News
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး Mr. MARUYAMA Ichiro သည် ဧရာဝတီစင်တာသို့ လာရောက်ကြည့်ရှု့ခဲ့ပြီး COVID 19 ကုသရေး လုပ်ငန်းများတွင် တတ်နိုင်သမျှဝိုင်းဝန်း ကူညီပံ့ပိုးပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ အလားတူ အစ္စရေးနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Ronen Gilor နှင့်သံရုံး တာဝန်ရှိသူများသည်လည်း ဧရာ၀တီ စင်တာသို့ လာရောက်ကြည့်ရှု့ခဲ့ရာ တာဝန်ရှိသူများက ကုသဆောင်များနှင့် ICU, HDU အရေးပေါ် ကြပ်မတ်ကုသဆောင် တို့ကို လိုက်လံပြသခဲ့သည်။ အစ္စရေး သံအမတ်ကြီး အနေဖြင့် COVID 19 ကုသရေး လုပ်ငန်းများတွင် လိုအပ်မှုများအား တတ်နိုင်သမျှ ကူညီပံ့ပိုးပေးသွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ပြောကြားခဲ့သည်။
ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အီတလီ နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Ms. Alessandra Schiavo နှင့် ဧရာ၀တီ ဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌတို့သည် ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် Online Meeting ပြုလုပ်ခဲ့ကြရာ အီတလီနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးက ဧရာ၀တီစင်တာ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများကို သံရုံးတာဝန်ရှိသူများ ကြည့်ရှုခွင့်ရ၍ ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း၊ ICU, HDU ကုသဆောင်တွင် ဆရာဝန်ကြီးများ၏ ကုသရေး လုပ်ငန်းများကိုလည်း တတ်နိုင်သမျှ ဝိုင်းဝန်း ကူညီဆောင်ရွက်လိုပါကြောင်း၊ အီတလီ နိုင်ငံတွင် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည့် COVID 19 အခြေအနေနှင့် ကုသရေး အတွေ့အကြုံများကိုလည်း မျှဝေပေးလိုပါကြောင်း၊ ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းများကိုလည်း အီတလီမှ ဆရာဝန်ကြီးများနှင့် ကျွမ်းကျင်သူများ၏ ICU, HDU ဆိုင်ရာ သင်တန်းများ ပို့ချခြင်းနှင့် လိုအပ်သည့် ကူညီပံ့ပိုးခြင်းများ ပြုလုပ်ပေးလိုပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ဦးဇော်ဇော်က က ဧရာဝတီစင်တာသည် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစား ဝန်ကြီးဌာန၏ လမ်းညွှန်မှုများဖြင့် ဆောင်ရွက်နေသည့် စင်တာဖြစ်ပါကြောင်း၊ သံအမတ်ကြီး၏ အစီအစဉ်ကို ဝန်ကြီးဌာနသို့တင်ပြပြီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ခွင့်ပြုချက်ရရှိ၍ အီတလီနိုင်ငံမှ ဆရာ၀န်ကြီးများနှင့် ကုသရေး ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများ ရောက်ရှိလာပါက မိမိအနေဖြင့် နေထိုင်သွားလာ စားသောက်ရေး အတွက် တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။